မက္ကဆီကို အလယ်ပိုင်းရှိ ဆေးရုံ၌ ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၁၇ ဦး သေဆုံး - Xinhua News Agency
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ စက်တင်ဘာ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုအလယ်ပိုင်း Hidalgo ပြည်နယ်၊ Tula မြို့ ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးမှုကြောင့် ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် လူနာ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင်ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၆ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိုးစတင်ရွာသွန်းခဲ့ကာ Hidalgo ဒေသရှိ Tula မြစ်ရေလျှံသွားခဲ့ကြောင်း ၊ မက္ကဆီကိုလူမှုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း (IMSS) ၏ဇုန်အမှတ် ၅ ရှိ အထွေထွေဆေးရုံကြီးအား ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး အရေးပါသောဝန်ဆောင်မှုများ ပျက်ပြားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ လူ ၁၇ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်’’ ဟု Hidalgo ၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Omar Fayad က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သေဆုံးသူများအနက် လူနာ ၁၅ ယောက်မှာ COVID-19 ရောဂါ ခံစားနေကြရသူများဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆေးရုံရေလွှမ်း မိုးမှု ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်ကာ ကံဆိုးစွာဖြင့် ၎င်းတို့အားပေးထားသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပြတ်တောက်၍ သေဆုံးခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြားသေဆုံးသူနှစ်ဦး မှာ ဆေးရုံသို့ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲရောက်ရှိလာခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့တွင် လည်း COVID-19 ရောဂါရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
၎င်းဆေးရုံသည် Tula မြို့၌ ရေဘေးဒဏ်အဆိုးဝါးဆုံးခံရသော အဆောက်အအုံ ငါးလုံးအနက် တစ်လုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ရေတစ်မီတာအမြင့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် တစ်မြို့လုံးလျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ဆေးရုံ၏ ဓာတ်အားပေးစက်များလည်း ရပ်တံ့သွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆေးရုံရေလွှမ်းမိုးမှုခံနေရချိန်တွင် ဆေးရုံအတွင်း ဆေးရုံဝန်ထမ်း ၁၀၄ ယောက်နှင့် လူနာ ၅၆ ယောက် ရှိနေပြီး ၎င်းတို့အနက်ထက်ဝက်ခန့်မှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သိရသည်။
မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းလျက်ရှိသောကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုးလာနိုင်၍ Tula မြစ်ကမ်းအနီးနေထိုင်သူများအနေဖြင့် ဘေးလွတ်ရာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရန် Fayad ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သော နံနက်ပိုင်းတွင် မက္ကဆီကို သမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador က စစ်တပ်၏ DN-III ဟုခေါ်သော အစီအစဉ်ဖြင့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကူညီမည်ဟု အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Floods in hospital kill 17 in central Mexico
MEXICO CITY, Sept.7(Xinhua) — Floods killed 17 patients inahospital following heavy rains in Tula,acity in the central Mexican state of Hidalgo, authorities said Tuesday.
Rains starting on Monday afternoon in Hidalgo caused the area’s Tula River to overflow, disrupting vital services and flooding the General Hospital of Zone No.5of the Mexican Social Security Institute (IMSS).
“We have, unfortunately, 17 deaths,” Governor of Hidalgo Omar Fayad told the press. According to reports, 15 of the deceased had COVID-19 and died because “the hospital was flooded and was left without power, and unfortunately they were on respiratory support.”
The other two victims arrived at the hospital without vital signs and they also had COVID-19, he said.
The hospital was one of the five hardest-hit buildings in Tula, where floodwaters reached as high asameter.
As the power supply collapsed citywide, power generators at the flooded hospital also failed.
When the facility was flooded, there were 104 hospital staff members and 56 patients in the building, about half of whom were infected with COVID-19.
Fayad called on the population living near the Tula River to evacuate and go to temporary shelters, because if the rains continue, “it can get worse.”
During his morning press conference, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador stressed the implementation of the army’s so-called DN-III plan to help flood victims. Enditem